बलियो कानुनमामा छिद्र नै धेरै
नेपालको कानुन दैव जानुन्, नेपालको कानुनको ९ सिङ् भन्ने उखान समाजमा चल्तीमा छ । पञ्चायत, बहुदल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे आए पनि र जतिपटक नयाँ संविधान बनाए पनि समाजको कहावत गलत साबित हुन सकेन । यसमा कानुन क्षेत्रमा लागेका हामी सबै जिम्मेवार छौं । खासगरी कानुनलाई कमजोर पार्न सरकार र सर्वोच्च अदालत पनि जिम्मेवार छ ।
सर्वोच्च अदालत किन सर्वदलीय अदालतजस्तो देखियो ? यही एउटा प्रश्नमा कानुन किन कमजोर भयो, कानुनी राज्य किन हुनसकेन ? अदालत मन्दिर बन्न नसक्नुका सारा कुराहरु अन्तर्निहित छन् । पद्धतिमात्र राम्रो भएर नहुनेरहेछ, पद्धति हाँक्ने कमाण्डर र पद्धतिका इन्जिन दुरुस्त हुनुपर्ने रहेछ । गाडी राम्रो भएर पनि नहुने, चालक राम्रो भएर पनि नहुने, एउटाको कमजोरीले दुर्घटना हुनसक्ने, यस्तै छ नेपालको कानुन दैव जानुन् ।
कानुनमा छिद्र खोजी खोजी फैसला हुन थालेपछि कानुनको रक्षा हुनसक्दैन । रक्षक नै भक्षक भएका अनेक उदाहरणहरु छन् । गजब त के पनि छ भने पचासौं वर्ष वकालत गरेको अधिवक्ता कुन मुद्दामा कस्तो फैसला हुनुपर्छ भन्नसक्छ, तर फैसला विपरित आएपछि जिल्लाराम पर्छ । नेपालको कानुनको कार्यान्वयन र सही फैसला नहुँदा कानुन कमजोर बनेको र अनियमितता गर्नेको ठूलो स्वर भएको हो । नैतिकहीनता कानुन, राजनीति, प्रशासनकर्मी र न्यायाधीश सबैतिर छ । सत्य यही हो । यो कटु सत्यलाई सुधार्नैपर्छ ।